दुःखद् खबर:-३३ बर्षका नेपाली डाक्टर रोशनको अमेरिकामा नि’धन,,,,भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली !!! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
दुःखद् खबर:-३३ बर्षका नेपाली डाक्टर रोशनको अमेरिकामा नि’धन,,,,भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली !!!
काठमाडौँ । अमे’रिकामा ३३ वर्षका एक डाक्टरको निधन भएको छ । अमेरिकाको न्यु योर्कस्थित रोचेष्टरको अस्पतालमा कार्यरत नेपाली डाक्टर रोशन झाको ३३ बर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण निधन भएको उनी कार्यरत अस्प’तालका साथी’हरुले गो फ’ण्ड मिको अका’उन्टमा लेखे’का छन्।
रेजिडेन्ट फिजिशियनका रुपमा का’र्यरत डाक्टर रोश’नकी श्रीमती डेन्टिस्ट बि’षयको अ’ध्ययन गर्दैछिन । नि’धन भए’को दिनमा पनि बिरामीको उप’चारमा खटिए’का डाक्टर रो’शनकी श्रीमती बिहानको खा’ना बनाएर उनलाई प’र्खेर बसे’की थि’इन्।
तर दुर्भाग्य उनले त्यो खाना खान पाएनन। पारिवारिक स्रोतका अनुसार डाक्टर रोशनले डाक्टर पढ्नकै लागि करिब ३ लाख डलर लोन लिएको बताइन्छ ।
उनको उक्त लोन तिर्नमा सहयोग मिलोस् भन्ने हेतुले उनका आफन्त र साथीभाईले गो फ’ण्ड मी अकाउण्ट शुरु गरेका छन् । जसमा अहिलेसम्म १ लाख ३९ हजार डलर सहयोग उठिसकेको छ ।
Previous “हामी छिट्टै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिँदैछौँ” – प्रधानमन्त्री ओली,,,हेर्नुहोस।
Next भारतमा उत्पादन हुने खोप बजारमा आउनेबित्तिकै नेपाललाई उपलब्ध गराउने हर्षवर्धनको प्रतिबद्धता,,,,हेर्नुहोस।